မင်းသမီးတစ်ဦးအား အဘတွေကို တောင်းပန်လိုက်ရင် အပြစ်ကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စ… – Cele Lover
မင်းသမီးတစ်ဦးအား အဘတွေကို တောင်းပန်လိုက်ရင် အပြစ်ကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စ…
ပရိသတ်ကြီးရေ မိုးယံဇွန်ကတော့ PPP အမတ် ကျော်ဇေယျရဲ့ သားဖြစ်တာကြောင့် ဖခင်နဲ့နည်းတူ တော်လှန်ရေးပါဝင်သူများကို လိုက်ပြီး တိုက်ခိုက် နေတာပါနော်။ အနုပညာအသိုင်းဝိုင်းက တစ်ယောက်ကတော့ မိုးယံဇွန်ဟာ မင်းသမီးတစ်ဦးအား အဘတွေကို တောင်းပန်ရင် အပြစ်က လွတ်လောက် တယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့အကောင့်မှာ တင်ခဲ့တာပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးယံဇွန်ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကတော့ ” ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် တစ်ခါမှ စော်ကားမှုတွေ ရန်ငြိုးတွေလည်း မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလိုနာမည် တပ်ပီးရေးရတာလဲ???ခင်ဗျား ကိုအတိအကျပြောတယ်ဆိုတဲ့ သူကဘယ်သူလဲ???ဘယ်ကကောင်/မလဲ???ကျွန်တော်က ပြောတယ်ဆိုတဲ့ မင်းသမီး???ဘယ်မင်းသမီးလဲ? ဘယ်ကမင်းသမီးလဲ?အဘတွေ ဆိုတာကရောဘယ်ကလဲ???ဘယ်နားက အဘတွေလဲ???သိချင်လွန်းလို့ အတိအကျမြန်မြန်လေးရှင်းပေးပါ
!!!!!ခင်ဗျားsmsမှာပြန်ပြော ထားတဲ့အတိုင်း အမြန်ဆုံးရှင်းပေးပါ !!!!!(ခင်ဗျားနဲ့ အနုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုအတူလုပ်ခဲ့ဖူးလို့ စေတနာနဲ့ အကြံပေးလိုက်မယ်အခုလိုမျိုး ကျွန်တော်မှ မဟုတ်ဘူးသူတစ်ဖက်သားကို
အခြေအမြစ်မရှိ သက်သေ အတိအကျမရှိပဲ social media မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ပီး အပင်ပန်းခံ$ဖောင်းထု အာချောင်နေမယ့် အစားအခု ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့သောကဒုက္ခ အန္တရယ်ဘေးကနေကင်းလွတ် အောင် အတွက်ပဲအပင် ပန်းခံတာ ပိုပီးအကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်)” လို့ ရေးသားပြီး ရှင်းထားတာပါ။
တစ်ဖက်ကလည်း ” မိုးယံဇွန် မနေ့ညက ဖုန်းဆက်တယ်။ ဒလန်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ကျွန်တော် မကိုင်တော့ SMS ပို့ပြီးကျွန်တော် မနေ့နေ့လည်က status တင်ထားသလို သူဘယ်မင်းသမီး ကိုမှ “အဘတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါ။ သူတို့ကခေတ် အဆက်ဆက်နိုင်နေကျပါ” ဆိုတဲ့စကားမပြောဖူးပါဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒီကိစ္စ ကိုဖြေရှင်းပေးပါ။ သူ့ဘက်ကလုံးဝ မပြောခဲ့ဘူးချည်းပဲပြောတယ်။ မဖြေရှင်းပေးရင် အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲမယ်။
ကလေးတွေ သေဒါဏ်ကျခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ အသရေဖျက်မှု လောက်ကို ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကြားလာတာကို source ဖော်ပြီး မဖြေရှင်းချင်ဘူး။ ဟိုမှာက သူ့အပူနဲ့သူ။ ကျွန်တော်လျှာရှည်လို့ ဒုက္ခပိုမရောက်စေချင်ပါ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စကားအတွက် ကျွန်တော် တာဝန်ယူပါတယ်။ အဲဒီ status ဟာဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်ပဲကျွန်တော်
တစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ source မဖော်ပြနိုင်တဲ့ အထက်ပါစွပ်စွဲချက်အတွက် ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းက ကာယကံ ရှင်အားတောင်းပန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် boycott လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားအတွက်တော့ မတောင်းပန်နိုင်ပါ။ တစ်သက်လုံး boycott ပါ။ ကိုယ့်မင်းသား မင်းသမီးတွေထွက်ပြေးနေရချိန်မှာ MWD မှာဖျော်ဖြေရေးလုပ်နေတဲ့ မင်းသားနဲ့ နောက်နောင်ဘယ်တော့မှအလုပ်တွဲ မလုပ်နိုင်ပါ။” တိတိကျကျပြန်ပြောထား တာပါနော်။
မင္းသမီးတစ္ဦးအား အဘေတြကို ေတာင္းပန္လိုက္ရင္ အျပစ္ကလြတ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥ…
ပရိသတ္ႀကီးေရ မိုးယံဇြန္ကေတာ့ PPP အမတ္ ေက်ာ္ေဇယ်ရဲ႕ သားျဖစ္တာေၾကာင့္ ဖခင္နဲ႔နည္းတူ ေတာ္လွန္ေရးပါဝင္သူမ်ားကို လိုက္ၿပီး တိုက္ခိုက္ ေနတာပါေနာ္။ အႏုပညာအသိုင္းဝိုင္းက တစ္ေယာက္ကေတာ့ မိုးယံဇြန္ဟာ မင္းသမီးတစ္ဦးအား အဘေတြကို ေတာင္းပန္ရင္ အျပစ္က လြတ္ေလာက္ တယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕အေကာင့္မွာ တင္ခဲ့တာပါ။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိုးယံဇြန္ရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ကေတာ့ ” ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္ဗ်ားနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခါမွ ေစာ္ကားမႈေတြ ရန္ၿငိဳးေတြလည္း မရွိပါဘူး ဒါေပမယ့္ ဘာရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလိုနာမည္ တပ္ပီးေရးရတာလဲ???ခင္ဗ်ား ကိုအတိအက်ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ သူကဘယ္သူလဲ???ဘယ္ကေကာင္/မလဲ???ကြၽန္ေတာ္က ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ မင္းသမီး???ဘယ္မင္းသမီးလဲ? ဘယ္ကမင္းသမီးလဲ?အဘေတြ ဆိုတာကေရာဘယ္ကလဲ???ဘယ္နားက အဘေတြလဲ???သိခ်င္လြန္းလို႔ အတိအက်ျမန္ျမန္ေလးရွင္းေပးပါ
!!!!!ခင္ဗ်ားsmsမွာျပန္ေျပာ ထားတဲ့အတိုင္း အျမန္ဆုံးရွင္းေပးပါ !!!!!(ခင္ဗ်ားနဲ႔ အႏုပညာအလုပ္တစ္ခုကိုအတူလုပ္ခဲ့ဖူးလို႔ ေစတနာနဲ႔ အႀကံေပးလိုက္မယ္အခုလိုမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္မွ မဟုတ္ဘူးသူတစ္ဖက္သားကို
အေျခအျမစ္မရွိ သက္ေသ အတိအက်မရွိပဲ social media မွာပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ပီး အပင္ပန္းခံ$ေဖာင္းထု အာေခ်ာင္ေနမယ့္ အစားအခု ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရတဲ့ေသာကဒုကၡ အႏၲရယ္ေဘးကေနကင္းလြတ္ ေအာင္ အတြက္ပဲအပင္ ပန္းခံတာ ပိုပီးအက်ိဳးရွိမယ္ထင္တယ္)” လို႔ ေရးသားၿပီး ရွင္းထားတာပါ။
တစ္ဖက္ကလည္း ” မိုးယံဇြန္ မေန႔ညက ဖုန္းဆက္တယ္။ ဒလန္ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ မကိုင္ေတာ့ SMS ပို႔ၿပီးကြၽန္ေတာ္ မေန႔ေန႔လည္က status တင္ထားသလို သူဘယ္မင္းသမီး ကိုမွ “အဘေတြကိုေတာင္းပန္လိုက္ပါ။ သူတို႔ကေခတ္ အဆက္ဆက္ႏိုင္ေနက်ပါ” ဆိုတဲ့စကားမေျပာဖူးပါဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ဒီကိစၥ ကိုေျဖရွင္းေပးပါ။ သူ႔ဘက္ကလုံးဝ မေျပာခဲ့ဘူးခ်ည္းပဲေျပာတယ္။ မေျဖရွင္းေပးရင္ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲမယ္။
ကေလးေတြ ေသဒါဏ္က်ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အသေရဖ်က္မႈ ေလာက္ကို ကြၽန္ေတာ္မေၾကာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ၾကားလာတာကို source ေဖာ္ၿပီး မေျဖရွင္းခ်င္ဘူး။ ဟိုမွာက သူ႔အပူနဲ႔သူ။ ကြၽန္ေတာ္လွ်ာရွည္လို႔ ဒုကၡပိုမေရာက္ေစခ်င္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ယူပါတယ္။ အဲဒီ status ဟာဘယ္သူနဲ႔မွ မဆိုင္ပဲကြၽန္ေတာ္
တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္။ source မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ အထက္ပါစြပ္စြဲခ်က္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းက ကာယကံ ရွင္အားေတာင္းပန္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ boycott လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စကားအတြက္ေတာ့ မေတာင္းပန္ႏိုင္ပါ။ တစ္သက္လုံး boycott ပါ။ ကိုယ့္မင္းသား မင္းသမီးေတြထြက္ေျပးေနရခ်ိန္မွာ MWD မွာေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ေနတဲ့ မင္းသားနဲ႔ ေနာက္ေနာင္ဘယ္ေတာ့မွအလုပ္တြဲ မလုပ္ႏိုင္ပါ။” တိတိက်က်ျပန္ေျပာထား တာပါေနာ္။
Previous Article သင်္ကြန် အကြိုနေ့မှာ သံဃာတော်များ အား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟိန်းဝေယံ
Next Article သတင်းအမှားတွေနဲ့ ကောလဟာလတွေရှိနေ တဲ့ကြားကပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်